handraisantsika ny frankofonia, hoy ny prefen’Antananarivo Renivohitra Randriamanjarisoa Norbert. Nosinganiny manokana ireo sarety sy posy mivoaka amin’ny ora tsy tokony hivoahany, indrindra fa ireo mihazo iny Faritra Anosy sy Anosibe iny. Toraka izany ihany koa ny môtô scooter izay notsindriany manokana fa tokony hanana laharana avokoa ireo mihoatra ny 50 cc manomboka izao, lalana efa nisy saingy ninian’ny sasany tsy narahina hatramin’izay. Tanjona ny hanafoanana ny fitohanana be loatra toy ny misy eto an-drenivohitra isan’andro ankoatra ny hanehoana amin’ny vahiny fa mahay mandray vahiny ny mponin’Antananarivo sady manara-dalàna ihany koa, hoy izy. Nitohy tamin’ny fivoriana niarahany tamin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra izany omaly folakandro hahafahana mandamina sy mametrapetraka ireo tsara ho fantatra rehetra.